यसरी मनाउनुहोस् स्वस्थ तिहार – Etajakhabar
काठमाडाैं – तिहार, बत्तीको चाड । उज्यालोको चाड । सँगसँगै मिठो–मसिनो खानपिन गरिने चाड । साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने र बिहानदेखि साँझसम्म तास खेलेर दिन बिताउने चाड । गाउँघरवरपर देउसी–भैलो खेलेर मनाइने चाड तिहार आइसक्यो । घरआँगन सफासुग्घर राख्नुु, पटाका पड्काउनु र झिलिमिली उज्यालो पार्नु तिहारका विशेषता हुन् । यसबाहेक तिहारमा गुलियो र चिल्ला परिकारहरू प्रशस्त मात्रामा खाने गरिन्छ । कतिपय व्यक्ति वर्षौंपछि भेटघाट भएका साथीभाइसँग तास खेलेर हजारौँ उडाउँछन् । यति मात्रै होइन, रमाइलो गर्ने बहानामा अत्यधिक मात्रामा मदिरा सेवनसमेत गर्छन् उनीहरू, जुन स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । दीपावली एउटा रमाइलो पर्व हो । तर, होस पु¥याइएन भने यसले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनगिन्ती समस्या निम्त्याउँछ । स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी तिहार मनाउने कसरी त ? नयाँ पत्रिकाका रामजी ज्ञवालीले मुटुरोग विशेषज्ञ डा. दीपेश प्रधान र जनरल फिजिसियन डा. नन्दु पाठकसँग स्वस्थ तिहार कसरी मनाउने भनेर प्रश्न सोधेका छन् ।
तिहारमा रातभरि तास खेल्ने चलन छ । दिनरात तास खेल्दा मानिसमा तनाव उत्पन्न हुन्छ । तनाव उत्पन्न भएसँगै सुगर बढ्ने, प्रेसर बढ्ने हुन सक्छ । सकेसम्म केही समय र रमाइलोका लागि तास खेलौँ, जुवाडे नबनौँ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
खानैपरेमा हार्डड्रिंक्स ३० एमएल र एक गिलास बियरसम्म खान सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कार्तिक ०३, २०७४ समय: ७:३१:१०